Imidlalo ye-Indie yeMac eya kukuthimba | Ndisuka mac
Imidlalo ye-Indie yeMac eya kukuthimba
UJose Alfocea | | Imidlalo
Namhlanje ndivela eMac siza kunika omnye umdlalo kule nto kwaye, ukuba kukho into eninzi kwiVenkile yeApple yeMac, yimidlalo yazo zonke iintlobo, ukusuka kwezo ziyilelwe abantwana ukuba baqale ukufunda , kwii-graphic adventures ezimangalisayo zesenzo, ii-adventures kunye neemfihlakalo. Kodwa namhlanje asizukugxila kwimidlalo yeMac ngokulandela iikhrayitheriya zomxholo wabo, kodwa sizimase abadali babo.
Ngokwesiqhelo yimidlalo ephuhliswa zi studio ezinkulu nezinodumo ezihlala ziphumelela ngakumbi kokubini ngokukhuphela kunye nokugxekwa ngamajelo eendaba akhethekileyo, nangona kunjalo, zikhona ezinye iintlobo zabaphuhlisi, ezizimeleyo, abenza umzamo omangalisayo wokufeza indalo yabo. Kwa-Apple bayayazi indlela yokuwuqonda lo msebenzi ngokwenza icandelo elibalaseleyo leMidlalo ye-Indie, kwaye namhlanje ndivela eMac siza kubonisa ezinye zezo sizifumana zinomdla kakhulu. Ke, ukuba ujonga umdlalo owahlukileyo kunesiqhelo, kuya kufuneka uqhubeke nokufunda.
1 Le imfazwe yam
3 I-SteamWorld Dig
Le imfazwe yam
Le imfazwe yam Umdlalo onjengemfazwe, kodwa wahluke kakhulu kule nto uyibonileyo ukuza kuthi ga ngoku. Ngokwesiqhelo, kwimidlalo yemfazwe wamkela ijoni elite, nangona kunjalo apha umele iqela labantu abavaleleke kwisixeko esingqingiweyo kwaye injongo yabo ingekuko ukusinda.
Le imfazwe yam "Inika amava emfazwe abonwe ngekona entsha" apho kuya kufuneka ujongane nokunqongophala kokutya, amayeza kunye nengozi ehlala ihleli yabanqolobi.
Imini nobusuku ziya kuseta isantya sakho: hlala ukhuselekile kwii-snipers emini, ujonge ngaphandle phantsi kwesibhakabhaka sasebusuku, kwaye ulungiselele izigqibo ezinzima.
Yenza izigqibo zobomi nokufa ziqhutywa sisazela sakho. Zama ukukhusela wonke umntu kwindawo yakho yokuhlala okanye uncame ezinye zazo ukuze zisinde ixesha elide. Ngexesha lemfazwe, akukho zigqibo zilungileyo okanye zimbi, kukho kuphela ukusinda. Ngokukhawuleza ukuba uyiqonde, ngcono.
Le imfazwe yam iyahambelana nayo yonke iMac ene-OS X 10.7 ukuya phambili kwaye inexabiso le-18,99 euro.
IBADLAND yenye yeemidlalo ze-indie ezingenakuqatshelwa kuba, enyanisweni, yenye yezindululo zeVenkile ye App.
Badland Yiyo inyathelo lomdlalo wokudlala Ibonisa iigraphics ezimangalisayo ezotywe ngesandla kunye "nenani elothusayo lemigibe ekrelekrele, iipuzzle, kunye nemiqobo endleleni."
Impumelelo ye Badland Iqala ngo-2013, xa yayikhutshelwa i-iPad; Ukwamkelwa okukhulu kukhokelele ekwandeni kwayo kwi-Mac, kwaye sele inabadlali abangaphezu kwezigidi ezingama-20 abonwabela izinto ezinje:
Icala lokwehla inyathelo lomdlalo weqonga lomdlalo weqonga kunye nendlela yokudlala esekwe kwifiziksi.
Imowudi yabadlali abaninzi basekuhlaleni ukuya kuthi ga kubadlali aba-4 abanokudlala ngokubambisana kunye neendlela zokulwa.
Umkhankaso womdlali omnye onamanqanaba angama-100 akhethekileyo (ngaphezulu kweeyure ezili-15 zokudlala).
Ukuphuculwa kwemizobo esemgangathweni ephezulu kune-HD epheleleyo.
I-Badland iyahambelana ne-OS X 10.8 ukuya phambili kwaye ixabiso layo lixabiso nge- € 9,99
Siphelisa olu khetho lufutshane kwimidlalo ye-indie nge I-SteamWorld Dig, "I-adventure yezemigodi yeqonga eneempembelelo ezinamandla zemetro".
Kule mdlalo Kuya kufuneka uthathe ubuni beRusty, umgodi osebenza yedwa Ukufika kwidolophu enemigodi ngexesha lesidingo esikhulu. Uthumo lwakho? Ngokucacileyo yenza indlela yakho "kwilizwe lakudala, uzuza ubutyebi", kodwa kananjalo fumana "isoyikiso sakudala" esisithele phantsi komhlaba.
Con I-SteamWorld Dig uya kufumanisa:
Ihlabathi elityebileyo leerobhothi ezinikwe amandla ngumphunga.
Umhlaba ongaphantsi komhlaba uzele ziimfihlakalo, ubuncwane kunye nezoyikekayo.
Intsalela yempucuko yoluntu, uhlanga olonakeleyo lweetroglodyte.
Kwaye konke oku nge-9,99 euro kuphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Imidlalo » Imidlalo ye-Indie yeMac eya kukuthimba
Ngaba ixesha lisondele xa i-iPad Pro ilandelayo isebenza kwi-MacBook?
I-Apple ilungiselela ukuvulwa kweVenkile yokuqala ye-Apple eDubai